Kutheni le nto ufuna ukwenza ngokuzenzekelayo uvavanyo?
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Kutheni le nto ufuna ukuZenzekelayo kuvavanyo?
Kutheni unokwenza uvavanyo ngokuzenzekelayo? Zeziphi izibonelelo esizifumanayo ngovavanyo oluzenzekelayo?
Rhoqo xa abantu bethatha inxaxheba kuvavanyo oluzenzekelayo, eyona nto bajolise kuyo kukuyila iimvavanyo ezifanelekileyo ukuqinisekisa ukuba ikhowudi ezenzekelayo iyakwazi ukwenza kwaye iqhube uvavanyo.
Ngexesha le-sprint xa amalungu eqela ephantsi koxinzelelo lokuhambisa amabali ngexesha elimiselweyo, kuhlala kungekho xesha laneleyo lokuvavanya zonke iimeko ezicwangcisiweyo, kungasathethwa ke ngokubhala izikripthi zovavanyo oluzenzekelayo ukuvavanya ukusebenza okutsha.
Singazifumana sineenkcukacha zomsebenzi, ukufaka iikhowudi, ukuphonononga, ukwenza kunye nokulibala ngesona sizathu siphambili ngoba sizenzele uvavanyo!
Kutheni sisenza uvavanyo ngokuzenzekelayo?
Lo ngomnye wemibuzo endiyibuzayo xa ndenza udliwanondlebe nabagqatswa bendima yokuZenzekelayo yoVavanyo kwaye ndothuswa kukuba uninzi lwabaviwa lubonakala ngathi luphose esona sizathu siphambili nesibalulekileyo sokwenza uvavanyo. Ezinye zeempendulo endizifumana kubagqatswa zithembekile, kodwa asiyiyo impendulo endiyifunayo. Ezinye zeempendulo endizifumanayo kulo mbuzo ungentla zezi:
Yandisa ukuVavanywa koVavanyo
Le mpendulo ichanekile, kodwa siyichaza njani ingxelo? Ukuba sineemvavanyo ezili-100, singayilinganisela njani ipesenti?
Ngokuziqhelanisa novavanyo lokuzenzekelayo endaweni, unokubaleka iimvavanyo ezingamakhulu ngexesha elifutshane.
Ngenxa yoku, sinokwenza iimeko zovavanyo ezingakumbi, iimeko zovavanyo ezingakumbi kunye novavanyo kunye nedatha yokufaka yenqaku elinikiweyo kwaye ke sizuze ngakumbi ukuba inkqubo isebenza njengoko kulindelwe.
Nangona kunjalo, kuvavanyo kwaye ngakumbi uvavanyo oluzenzekelayo, iimvavanyo ezininzi azithethi mgangatho ongcono okanye ithuba elingakumbi lokufumana iibhugi.
Kwithuba likaMartin Fowler, apho alahla khona Ukuvavanywa kovavanyo , ukhankanya
Ukuba wenza inqanaba elithile lokugubungela ithagethi, abantu baya kuzama ukuyifumana. Ingxaki kukuba iinombolo zokugubungela eziphezulu kulula kakhulu ukufikelela kuzo ngovavanyo olukumgangatho osezantsi. Kwinqanaba elingenangqondo onalo AssertionFreeTesting . Kodwa ngaphandle kwaleyo ufumana iimvavanyo ezininzi ukhangela izinto ezinqabileyo ezingahambi kakuhle ekuphazamiseni ekuvavanyeni izinto ezibaluleke ngokwenene.
Le mpendulo iyinyani njengoko unokuchitha ixesha elibalulekileyo usenza uvavanyo olunomdla ngelixa iimvavanyo ezizenzekelayo ziqhuba. Nangona kunjalo, into entsha kraca ephuhlisiweyo, kungathatha ixesha elide ukubhala izikripthi ezizenzekelayo kunokuvavanya inqaku ngesandla ngephanyazo lokuqala.
Ke, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukonga ixesha kuvavanyo oluzenzekelayo, kufuna umzamo wokuqala owandisiweyo ekubhaleni iimvavanyo ezizenzekelayo, uqiniseke ukuba ikhowudi iphononongiwe, kwaye akukho zihijikuqhutywa kokwenziwa kovavanyo oluzenzekelayo.
Fumana ezinye iincukuthu
Le mpendulo iyandikhathaza ngamanye amaxesha njengoko ndingazange ndibone naziphi na iimethrikhi ezibonisa ukuba zininzi iibugs ezifunyenwe ngokuzenzekelayo ngaphandle kovavanyo lwencwadi / lokuhlola. Uvavanyo oluzenzekelayo ngokubanzi lukhangela nakuphi na ukubuyela umva kwinkqubo emva kokuba kwenziwe ikhowudi entsha.
Kuhlala kunamathuba amaninzi okufumana iibugs kumanqaku amatsha kunakwimisebenzi esele ikho. Ngapha koko, zikho nezinye izizathu Kutheni iimvavanyo ezizenzekelayo zisilela ukufumana iziphene
Faka endaweni yabavavanyi beNcwadi
Le yeyona mpendulo imbi kakhulu endiyivileyo ngokubhekisele kwinto yokuba senze uvavanyo ngokuzenzekelayo. Kukho umahluko ocacileyo phakathi kwento eyenziwa ngumvavanyi wesandla kunye novavanyo oluzenzekelayo. Uvavanyo oluzenzekelayo aluvavanyi, kukujonga iinyani.
Ukuze sikwazi ukwenza uvavanyo ngokuzenzekelayo, kuya kufuneka sazi iziphumo ezilindelekileyo ukuze sikwazi ukukhangela iziphumo ezifanelekileyo okanye ezingavumelekanga. Le yile nto isinika inyani okanye ubuxoki, okuhle okanye okungalunganga, ukupasa okanye ukusilela.
Ukuvavanya kwelinye icala luvavanyo lophando, apho siyila khona kwaye senze uvavanyo ngaxeshanye. Izinto ezininzi zinokuziphatha ngokwahlukileyo apho kuphela ngumvavanyi ongumntu onokuthi abone.
Abavavanyi abalungileyo bezandla baya kuhlala befuneka ngenxa yengqondo eyahlukileyo kunye nokukwazi ukubuza inkqubo.
Nangona iimvavanyo ezizenzekelayo zikwazi ukusinika ingxelo ekhawulezileyo kwaye zisilumkise ngempilo yesicelo, ukuze sikwazi ukubuyisa naluphi na utshintsho lwekhowudi olwaphule inkqubo, uvavanyo oluzenzekelayo ngokwalo aluphuculi mgangatho. Kungenxa yokuba sinovavanyo oluzenzekelayo lovavanyo oluzenzekelayo aluqinisekisi ukuba akukho bugs zibalekela kwimveliso.
Sinokuphucula umgangatho ngokuqinisekisa ukuba iinkqubo ezifanelekileyo ziyalandelwa ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni somjikelo wophuhliso. Umgangatho awukho emva kokucinga; kufanele ukuba ibhakwe kwasekuqaleni. Akwanelanga ukuxhomekeka kwiimvavanyo ezizenzekelayo ukufumana umfanekiso wobunjani bemveliso.
Ke, sesiphi esona sizathu siphambili sovavanyo?
Impendulo emfutshane yile ukuphindaphinda . Senza uvavanyo ngokuzenzekelayo kuba sifuna ukwenza iimvavanyo ezifanayo amaxesha ngamaxesha. Ngaba uyafuna ukwenza uvavanyo oluzenzekelayo ukuba ubuya kuluqhuba kube kanye kwaye ulibale ngalo? Akunjalongo noko! Ixesha kunye nomzamo owuchithayo ekwenzeni uvavanyo ngokuzenzekelayo, ubunokuwenza ngesandla.
Ngoku, ngokwenkcazo, senza iimvavanyo eziphindaphindekayo, okt iimvavanyo zokuhlengahlengisa, ekufuneka sizenze rhoqo.
Ke, kwixa elizayo, xa ufuna ukwenza uvavanyo ngokuzenzekelayo, thatha inyathelo umva kwaye ucinge ukuba kunokwenzeka kangaphi ukwenza olu vavanyo? Ngaba kufanelekile ngenzame ukwenza uvavanyo ngokuzenzekelayo?
Iifowuni ezinobomi obubhetele bebhetri
iphone icebise ukuba ii -apps zivaliwe
Eyona meko ilungileyo ye-iPhone 12 kunye ne-12 Pro